Saraakiisha caafimaadka ayaa xaqiijinaya in cudurka coronavirus uu ka dillaacay warshad hilibka cuna | KWIT
Dhanka kale, Xoghayaha Beeraha ee Gobolka ayaa shaaca ka qaaday qorshe lagu caawinayo soosaarayaasha hilibka doofaarka oo lagu qasbay inay xoolahooda ka baxaan Macluumaadka Jaamacadda Iowa State waxay muujineysaa in ka badan 600,000 oo hogs ah beeraha Iowa.
Degmooyinka Woodbury iyo Dakota ayaa sheegay inaysan jirin wax dhimasho ah oo cusub Khamiista. Waxaa jira 23 kiis oo cusub oo ka dhacay Gobolka Woodbury oo ku dhow 2,700 kiis. Degmada Dakota waxay leedahay labo kiis oo cusub oo ka badan 1,600. Waxa jira 88 kiis oo togan oo ka jira Union County.
Maanta, baararka ku baahsan gobolka, oo ay ku jiraan Gobolka Woodbury waxay furan karaan 50% awoodda. Waaxda Boliiska Magaalada Sioux waxay leeyihiin ma hayaan askar u heellan dhaqan galinta tilmaamaha fogeynta bulshada. Si kastaba ha noqotee, wixii baararka ku xadgudba tilmaamaha awooda waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan liisanadooda.
Afayeen u hadlay warbaahinta Siouxland Public media, waa o.k. inaad wakhti fiican haysatid, laakiin aamin noqo.
Warbixinta horumarinta Iowa Workforce Development ku dhawaad 14,600 shaqaale ah ayaa gobolka usbuucii la soo dhaafay u gudbiyay sheegashooyinka shaqo la'aanta cusub. Taasi waa koror usbuucii ka horreeyay. Soo-saarkii ayaa mar kale ahaa wershadaha iyada oo tirada ugu badan ee sheegashooyinka ay ku xigto iskood u shaqeysteyaal iyo shaqaale daryeel caafimaad. Tirada dadka reer Iowan ee sii wata qaadashada dheefaha shaqo la’aanta ayaa mar kale hoos u dhacday usbuucii hore ilaa qiyaastii 180,000.
Ku dhawaad 5,900 degane Nebraska ayaa dalbaday shaqo la’aan wiiggii hore. Taasi waxay lamid tahay usbuucii la soo dhaafay. Tani waxay keenaysaa tirada sheegashada ee gobolka Nebraska 129,000 illaa iyo badhtamihii Maarso.
By Halima Osman • May 26, 2020
Shirkeeda maalinlaha ah ee maalinlaha ah, Gudoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu ku dhawaaqay fududeynta xayiraado dheeri ah oo la dhigay si loo joojiyo fiditaanka COVID-19.
Isniinta soo socota, kaararka casriga ah, wadooyinka orodka, orodka orodka, meelaha lagu ciyaaro, jardiinooyinka madadaalada iyo meelaha muusikada lagu ciyaaro ee banaanka ah waxay ka furi karaan 50% awooda. Sidoo kale, ciyaaraha iyo isu imaatinka bulshada in ka badan 10 qof ayaa la ogolaan doonaa.
By Halima Osman • May 20, 2020
Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa fududeynaya xannibaadaha ka jira gobolka Iowa. Laga bilaabo Jimcaha, tiyaatarada filimada, matxafyada, xeryaha xayawaanka lagu ciyaaro iyo meelaha aroosyada lagu furi doono tilmaamaha jahawareerka bulshada ayaa jira. Barkadaha ayaa dib u furi kara casharka iyo casharrada
Khamiista, Maajo 28-keeda ayaa furi kara 50% awoodda.